PCB guriga caaqil - Shiinaha Fastpcba Technology
Taageerada email 0755-26978877
Taageerada Call pcba19@pcb-smt.net
guddiga Nabadgalyada iyo Ilaalinta jilicsan
PCB isgaarsiinta awood
qalabaynta warshadaha keentay
PCB guriga caaqil
FASTPCBA Technology Co., Ltd waa soo saaraha ah PCB xirfadeed ee Shiinaha, Shenzhen. Iyadoo 14 sano ee horumarinta, FASPCBA beddelin saaraha ugu horeysay fasalka ee PCB HDI, ee leh awood wax soo saarka 35,000 oo mitir oo laba jibbaaran. FASTPCBA waxaa bixiya adeeg PCB iyo PCB shirka u dhashay tayo sare leh, oo ay ku jiraan qaybaha qayblibaaxna, imtixaanka shaqada, daahan conformal iyo shirkii oo dhamaystiran macaamiisha adduunka oo dhan. Our istiraatiijiyad ganacsi dagaal awood inoo siineysaa in adeegyada tartan sare for our ...
FASTPCBA Technology Co., Ltd waa soo saaraha ah PCB xirfadeed ee Shiinaha, Shenzhen. Iyadoo 14 sano ee horumarinta, FASPCBA beddelin saaraha ugu horeysay fasalka ee PCB HDI, ee leh awood wax soo saarka 35,000 oo mitir oo laba jibbaaran. FASTPCBA waxaa bixiya adeeg PCB iyo PCB shirka u dhashay tayo sare leh, oo ay ku jiraan qaybaha qayblibaaxna, imtixaanka shaqada, daahan conformal iyo shirkii oo dhamaystiran macaamiisha adduunka oo dhan.
Our istiraatiijiyad ganacsi dagaal awood inoo siineysaa in adeegyada tartan sare oo kala duwan, oo saldhig macaamiisha ee tartan rasmi ah. Iyada oo qorshahan, waxaan way kari waayeen inay si degdeg ah, go'aamada dabacsan oo jawaab u xaaladda suuqa beddelo iyo in la abuuro qiimaha iyo faa'iidooyinka macaamiisha ugu badan.
Sida for Service, waxaan ku siin 7days 24hours on-line xirfadeed Pre-sale, Iibinta iyo adeegga Ka dib-Sale si ay u xalliyaan wixii su'aal ah oo ku saabsan amarka. Wakhti kasta, looga baahan yahay wax ka heli doono Reply degdeg ah ka shaqaalaheena si fiican u tababaran iyo saaxiibtinimo taageero.
Suuqa ugu weyn ee aan waa Europe, waqooyiga Maraykanka, Australia, South America, iyo Asia. waxaan dadaal badan oo dheeraad ah si ay u dhisaan xidhiidh la leh macaamiisha dheeraad ah ee degaanka ka badan gelin doonaa. Dhammaan waxaan rabnaa in la sameeyo, waa in lagu xiro dunida by waxyaabaha our, si ay u wadaagaan Qiimaha, Happyness iyo Achievement macaamiisha ka badan.
PCB iyo SMT shirka adeegga one-stop
FR4, sare TG FR4, hirka sare, alum, qoyska
Min.thickness for layers hoose
(CU dhumucdiisuna waa laga saaray)
Qaanso iyo weecin
miisaanka dibadda CU
miisaanka Inner CU
PTH dulqaad dalool
NPTH dulqaad dalool
Green, caddaan, madow, casaan, buluug ...
Min maaskaro Alxan clearanace
caddaan, madow, jaalle ah, buluug ah ...
100% imtixaanka Functional
X-ray, Test AOI, imtixaanka Functional
size Max guddida dhameysatay
HASL, ENIG, immersion lacag ah, iyo waxa daasadda bilowga ah, OSP ...
Square, goobada, aan joogto ahayn (oo la jigs)
Caaga, biraha, screen
Q1: Waa maxay adeegga baad haysaan?
FASTPCBA: Waxaan bixinaa xal macasha oo ay ku jiraan been PCB, SMT, duray caag & biraha, shirkii final, baaritaanka iyo adeeg kale oo qiimo-daray.
FASTPCBA: Adeegyada Our PCB / PCBA inta badan waxaa loogu talagalay warshadaha oo ay ka mid yihiin Caafimaadka, Automotive, Isgaarsiinta.
Q4: waxaan kormeeri karaa tayada inta lagu guda jiro soo saarka?
FASTPCBA: Haa, waxaan u furan yihiin oo hufan oo ku saabsan habka wax soo saarka kasta oo aan waxba haysan si ay u qariyaan. Waxaan soo dhawaynaynaa macaamiisha baadho habka wax soo saarka iyo hubi in guriga.
FASTPCBA: Waxaan diyaar u ah inay lasoo saxiixato NDA saamayn by dhinaca macaamiisha sharciga maxalliga ah iyo rajo in ay sii xogta macaamiisha ee heerka sare qarsoodi yihiin.
FASTPCBA: Waayo oraah PCB, fadlan ku Gerber data / files iyo tilmaan ah shuruudaha farsamo la xiriira iyo sidoo kale looga baahan yahay wax gaar ah haddii aad leedahay.
Waayo, oraah PCBA, fadlan Gerber data / files iyo sidoo kale BOM (biilka ka mid ah maaddooyinka), iyo haddii aad na u baahan tahay in ay sameeyaan baaritaanka shaqo, fadlan sidoo kale waxay bixiyaan barashada imtixaanka / habraaca.
FASTPCBA: marka la eego Delivery of EXW, FCA, FOB, DDU iwm yihiin oo dhan la heli karo oo ku salaysan xigasho kasta.
FASTPCBA: Sida caadiga ah 24 saacadood ilaa 48 saacadood sida ugu dhakhsaha badan u hesho injineer gudaha qiimeeyo xaqiijin.
FASTPCBA: No, ma aynu lihin MOQ looga baahan yahay, aan u taageeri karo mashaaricda aad bilaabo prototypes inay soo saarka mass.
Previous: elektarooniga caafimaadka PCB
Next: PCB qalabaynta warshadaha
6 Lakabka PCB
Manufacturer PCB Aluminum
Warshadaha PCB Bare
Manufacturer PCB Best
Manufacturer PCB dhoobada
Cheap Guddiyada PCB
Been PCB Cheap
Golaha PCB Shiinaha Quote Online
Shiinaha PCB string
Custom Board PCB
Fast PCB string
Hayalka san PCB string
Guddiga dabacsan PCB
Design PCB debecsan
Manufacturer PCB debecsan
Debecsan PCB string
Layout PCB Free
Free Software Layout PCB
Culus oo Copper PCB
PCB Xawaaraha Sare
Home PCB been abuurtay
Golaha keentay PCB
Guddiga Main PCB
PCB Lakabka Multi
Multilayer PCB been abuurtay
Online PCB been abuurtay
Online PCB saaraha
Order PCB Iyada oo ka Kooban
PCB Assembly Oo kabida,
PCB Golaha Express
PCB Golaha Rikoorka
PCB Golaha Online Quote
Golaha PCB Talaabooyinka Geeddi-socodka
PCB Golaha kabida,
Shirkado Golaha PCB
Guddiga Bare PCB Warshadaha
Guddiga PCB Making
Guddiga PCB qeybiye
PCB Board dhumucdiisuna
PCB ka kooban Golaha
Golaha been PCB
Been PCB Shiinaha
Notes been PCB
Soo-saareyaasha PCB ee USA
PCB Warshadaha Factory
Kit PCB Warshadaha
Quote PCB Online
PCB Daabacaadda Company
PCB string Oo Assembly
PCB string Shiinaha
PCB beddeli Engineering
Pcba Board Circuit
Wadanay Board Circuit PCB
Quick PCB string
Noqda Quick been PCB
Quick PCB Prototypes leexo
Wadanay PCB Rapid
Volume Small PCB Assembly
Hab-Smt PCB Warshadaha
Waa Maxay Golaha PCB
Waa Maxay Design PCB
Waa Maxay Warshadaha PCB
guriga caaqil guddiga jilicsan
guriga caaqil keentay
Maxay yihiin arrimaha la xiriira PCBA xun ...
Waa maxay xeerarka qaabka PCB ee t ku ...
Sidee dheer waa wareegga oraah SMT ee t ...